Invitation for 5th KATHINA ROBE Offering Ceremony
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကျောင်း၌ ပုရိမ၀ါမှ ထမြောက်တော်မူပြီးသော သံဃာတော်အရှင် သူမြတ်များ နှင့် ပင့်သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား ပဉ္စမအကြိမ် မဟာဘုံကထိန်သင်္ကန်း စုပေါင်းလှူဒါန်းဆက်ကပ်ပွဲကို ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာကောင်းနှင့်အညီ စီစဉ်ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါ၍ ကြွရောက်ကုသိုလ်ယူနိုင်ပါရန် ဓမ္မမိတ်ဆွေ ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အား နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်ကာ နှိုးဆော်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
You are cordially invited to celebrate CYMC 5th Kathina Robe Offering Ceremony as per following Programme.
DATE - ၁၃၇၈ ခု သီတင်းကျွတ်လဆုတ် (၁၃)ရက်၊ 29th October 2016 (Saturday)
VENUE - Multi-Purpose Hall, Block 792B, Choa Chu Kang North 6, S682792.
5minutes Walking Distance away from Yew Tee MRT Station [NS-5 RED LINE]